Business Run နရောမှာ Feedback မရလို့စိတျညဈနပေါသလား? -
Business တဈခုရဲ့ ရလဒျကောငျးမကောငျးကို User Feedback တှကေို ကွညျ့ပွီး ပွနျလညျ သုံးသပျလို့ရပါတယျ။ ဒါ ကွောငျ့User တှသေငျ့ရဲ့ Business အပျေါမှာ ဘယျလို Feedback တှပေေးလရှေိ့ကွလညျး၊ ဘာကွောငျ့ Feedback မရလညျးဆိုတာတှကေ ‘ User Experience’ အပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ ‘ User Experience’ ကို တဈနညျးအားဖွငျ့ ‘ UX’ ဆိုပွီး သိရှိကွပါတယျ။ ‘ User Experience’ ဆိုတာက သူတို့အသုံးပွုနကေတြဲ့ Company ရဲ့ Product, Service အပျေါမှာထားရှိတဲ့ Interaction Characteristic အကုနျလုံးကိုဆိုလိုခွငျးဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ System, Website အပျေါမှာ User Feedback တှေ ပိုမိုရရှိဖို့ရငျတော့ အောကျပါအခကျြလေးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ…
သငျ့ Website မှာ Feedback Button ထားပေးပါ
ဒီအခကျြက နညျးနညျးတော့ ဟာသပုံစံဖွဈနမှောပါ။ Website ဆောကျပွီဆိုကတညျးက Feedback Button ကတော့ပါဝငျနမှောဖွဈပါတယျ။ ယခုလို အခကျြတဈခကျြအနနေဲ့ ဘာကွောငျ့ပွောရလဲဆိုတာကတော့ တဈခြို့ Website တှမှော User က Feedback ပေးခငျြတာတောငျ Feedback Button ကိုမနညျးလိုကျရှာနရေတာတှေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ Website မှာ Feedback Button က ရိုးရိုးရှငျးရှငျးနဲ့ ရှာဖှေ ရလှယျမယျဆိုရငျတော့ User Feedback ရရှိဖို့ ပိုမိုအခှငျ့အလမျးမြားပါတယျ။
သငျ့ Website ကိုရောကျလာတဲ့ User တှကေို Feedback ပေးရငျ လကျဆောငျပွနျပေးခွငျး၊ eBook လေး တှပွေနျပေးခွငျး အစရှိတဲ့ မကျလုံးပေးခွငျးဟာလဲ User Feedback ပိုမိုရရှိစတေဲ့ အခကျြထဲမှာပါဝငျပါတယျ။ User တှရေဲ့ စိတျကိုလညျး Enjoy ဖွဈစတေော့ သငျ့ Website ကိုဝငျရောကျကွညျ့ရှုခဲ့တဲ့ User တှကေို ကွနေပျမှုရစပွေီး ‘ User Experience’ ပါရရှိစပေါတယျ။
Live Chat အသုံးပွုပါ
User တှဘောလိုအပျနလေဲဆိုတာကို သိခငျြရငျ Live Chat အသုံးပွုပေးပါ။ Live Chat ဟာ ‘ User Experience’ အတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈစတေဲ့ Tool တဈခုဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။ ဒီ Live Chat ကိုအသုံးပွုနမေယျဆိုရငျ On Site ကနေ User တှနေဲ့ တိုကျရိုကျထိစပျမှု ရှိနမှောဖွဈတဲ့ အတှကျ Feedback တှေ ပိုမိုရရှိလာဖို့ အခှငျ့အရေးပိုရပါတယျ။
Feedback ရရှိခွငျးဟာ Website တှေ System တှနေဲ့ လုပျငနျးလုပျကိုငျနတေဲ့ လုပျငနျးတှအေတှကျကောငျးမှနျတဲ့ ရလဒျတဈခုထဲမှာပါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ User Feedback တှကေို ဂရုစိုကျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ User Friendly ကောငျးကောငျးဖွဈထားတဲ့ လုပျငနျးတဈခုဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ ရလဒျတှကေို ရရှိ နိုငျတဲ့အတှကျ User Feedback တှလေညျး ရရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Business Run နေရာမှာ Feedback မရလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား?
Business တစ်ခုရဲ့ ရလဒ်ကောင်းမကောင်းကို User Feedback တွေကို ကြည့်ပြီး ပြန်လည် သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်User တွေသင့်ရဲ့ Business အပေါ်မှာ ဘယ်လို Feedback တွေပေးလေ့ရှိကြလည်း၊ ဘာကြောင့် Feedback မရလည်းဆိုတာတွေက ‘ User Experience’ အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ‘ User Experience’ ကို တစ်နည်းအားဖြင့် ‘ UX’ ဆိုပြီး သိရှိကြပါတယ်။ ‘ User Experience’ ဆိုတာက သူတို့အသုံးပြုနေကျတဲ့ Company ရဲ့ Product, Service အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ Interaction Characteristic အကုန်လုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ System, Website အပေါ်မှာ User Feedback တွေ ပိုမိုရရှိဖို့ရင်တော့ အောက်ပါအချက်လေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်…
သင့် Website မှာ Feedback Button ထားပေးပါ
ဒီအချက်က နည်းနည်းတော့ ဟာသပုံစံဖြစ်နေမှာပါ။ Website ဆောက်ပြီဆိုကတည်းက Feedback Button ကတော့ပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတာကတော့ တစ်ချို့ Website တွေမှာ User က Feedback ပေးချင်တာတောင် Feedback Button ကိုမနည်းလိုက်ရှာနေရတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Website မှာ Feedback Button က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရှာဖွေ ရလွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ User Feedback ရရှိဖို့ ပိုမိုအခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
သင့် Website ကိုရောက်လာတဲ့ User တွေကို Feedback ပေးရင် လက်ဆောင်ပြန်ပေးခြင်း၊ eBook လေး တွေပြန်ပေးခြင်း အစရှိတဲ့ မက်လုံးပေးခြင်းဟာလဲ User Feedback ပိုမိုရရှိစေတဲ့ အချက်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ User တွေရဲ့ စိတ်ကိုလည်း Enjoy ဖြစ်စေတော့ သင့် Website ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ User တွေကို ကြေနပ်မှုရစေပြီး ‘ User Experience’ ပါရရှိစေပါတယ်။
Live Chat အသုံးပြုပါ
User တွေဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာကို သိချင်ရင် Live Chat အသုံးပြုပေးပါ။ Live Chat ဟာ ‘ User Experience’ အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေတဲ့ Tool တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒီ Live Chat ကိုအသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင် On Site ကနေ User တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိစပ်မှု ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် Feedback တွေ ပိုမိုရရှိလာဖို့ အခွင့်အရေးပိုရပါတယ်။
Feedback ရရှိခြင်းဟာ Website တွေ System တွေနဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် User Feedback တွေကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ User Friendly ကောင်းကောင်းဖြစ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေကို ရရှိ နိုင်တဲ့အတွက် User Feedback တွေလည်း ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by seomhkl/ Tuesday February 5th, 2019/ Blog/0Comment